Kratom Danger: Waa maxay Halistu Real of Plant this waxyeeleeyay aad?
Posted by Lyndon deed	 5 Comments
Kratom waa geed yar oo si aad ah loo ismaandhaafku la labaduba u dabaal by qaar ka mid ah oo dhawrsaday kuwa kale. Waxaa jira kumanaan dad ah oo dunida ku isticmaala warshad this si kor loogu qaado niyadda, kordhin ay tamar maskaxda, yareeyo dareenka xanuunka iyo caawiso iyaga loo dabciyo up. Laakiin dhawaan, warbaahinta ee dalka Mareykanka ayaa lagu welwel isa sootaraya oo muhiim ah oo faafidda khuraafaadka ku saabsan ammaanka quote this "daroogada". Khatarta Kratom ayaa lagu kala hadlay inta jeer weyn ee wareegyada qaar ka mid ah, taasoo keentay in wadamada qaar u shaqeeya si ay u sharci darro ah. Si kastaba ha ahaatee, badan oo ka mid ah wararka ee khatarta Kratom ku salaysan yihiin warkeeda sal iyo sayniska sharciga lahayn. Articles news qaarkood waxay sheegeen in Kratom waa heer sare qabatimo, fududahay in xadgudubyada iyo heli doonaa users "sare" taasoo keentay in waxyeelo muddo dheer ah. All of wararkaas yihiin disproven by cilmi tacliimeed sameeyay galay saamaynta walax tan dabiiciga ah. Iibso Kratom Online halkan Ganacsato talinayo.
Ma Kratom Dangerous?
Ma jirtaa suuraggalnimo loogu isticmaalo Kratom in ay halis ah? Haa, waa cadeyd in sida ugu dhalatada kale oo saamayn ku yeelan kara habka aad u dareemayso, geedka caleemihiisuna waxay Mitragyna Speciosa ayaa lagu tacadin karaa oo loo isticmaali ka badan. Laakiin Kratom aan la qabsado in dareenka caafimaad ee hadalka iyo waxaa jira dhibaatooyin soo raaca la garanayo yar ee la xidhiidha isticmaalkeeda. Marka qaaday in yar, qaadashada gacanta ku hayso, ka Dhalatada Kratom si gaar ah ammaan oo bixiya gargaar caafimaad oo tiro badan. Waxyeelo xun kaliya bilaabi karaan in ay dhacaan marka users qaadashada kor loo qaado si ay 10 jeer xadiga lagu taliyay oo maalin walba u isticmaali bilooyin muddo ah.
In badan oo is aaminaad ku wareegsan Kratom ka yimaadaa xaqiiqada ah in dadka u maleyso inay tahay daroogada ah novel dardaro sida "cusbada qubeyska" ama "uunsigii" oo lagu xadgudbo by dhalinyarada maanta. Kratom waa in xaqiiqda ah walax daawo dabiici ah in ayaa waxay ka imanaysaa warshad Mitragyna Speciosa. Tani waa geed oo muddo dheer la aqoonsan bulshooyinka Asian Southeast sida bixiya faa'iidooyinka wanaagsan ee maskaxda fayo-qabka iyo caafimaadka jirka. Waxa loo isticmaalaa qayb ah in cuntooyinka ay sida, diyaar u galay shaah ah dhirta iyo maamulo sida nafisaad keenaysa xanuun ah. Sida ethnobotanical ah, warshad tani waxaa la sheegay in ay isticmaalaan bulshooyinka beerolay si ay u caawiyaan shaqaalaha beerta joogo tamaraysan iyo Salel, halka ka shaqeeya xaaladaha culus.
The Saamaynta Kratom buugii kuwa jidhka ee sahayda dabiiciga ah ee endorphins kaas oo lagu sii daayo ka dib jimicsiga. Dhalatada Tani si dabiici ah blunts dareenka xanuunka sidoo kale jawaabta nociceptive ee jirka. Waxaa waxan sameeyo aan lahayn wax khatar ah oo saameyn khatar ah sida depression-mareenka kaasoo dhici karaan xoog daawooyinka xannunka prescription. Kratom waxaa kaloo lagu arkay in la kordhiyo hawlaha maskaxda iyo users badan ayaa sheegay in ay tahay u xuli marka ay qaadato. Waxay kaa caawin karaan inaad buuxiso hawlaha gaar ahaan adag oo kor loogu qaadayo howlaha sare ee fulinta aad ee maskaxda. Kratom wax soo saarka u xoojinaya dareenka kordhaya, diiradda iyo xukunka oo dhan kuwaas oo ay hagaajin kartaa kartidaada ee hawlaha Ujeedada-bidaya.
Halista Kratom sheegay warbaahinta
Wararka ayaa tilmaamaya in dadka ku jira qaadashada Kratom si aad u hesho "sare" iyo inay kor u qaadaan ecstasy. Laakiin tani ma aha sharaxaad ku habboon oo ka mid ah saamaynta dheeri this. In yar ka qaataan, Kratom badan yahay sida caffeine; waxaa sababa in aad dareentid in tamaraysan weli mellow la weyn Hufnaan maskaxda. In qiyaasood weyn, waxaa laga yaabaa in mid ka mid dareento xoogaa niyadda kordha saamaynta iyo horumarinta dareen fudud ee rayn. Laakiin wakhtiga intiisa badan, qiyaasood waaweyn si fudud kuu gelin doonaa istareexsan oo aad dareento hurdo. Ma jiraan Xaaladaha ah qiyaasta xad dhaafka Kratom in la soo sheegay in Xarunta Xakamaynta Sunta oo waxaa weligey wax dhimasho ka Isticmaalka Kratom ee dalka Mareykanka. Badinta on geedaha yaryar waxay u baahan tahay qiyaasood ah si gaar ah oo weyn tan iyo markii uu jiro kala duwan oo muhiim ah ee loo isticmaalo ku-daweyn.
Mid kale oo khatar ku Kratom u maleeyeen waa in marka aad bilaabeyso isticmaalkeeda, aad noqon doonaa isla markiiba caadaysatay oo dhibaato ay ka baxeen daran haddii ay isku dayaan in aad weligaa si ay u joojiyaan. Arrintani waxaa maqalka ee xaqiiqda ah in Kratom ku jira alkaloids in agonize ka receptors opioid'ka ee jirka kaas oo ka jawaabin opiates iyo morphine. Laakiin receptors kuwaas oo sidoo kale ay ka jawaabaan endorphins noo dabiiciga ah taas oo lagu tilmaami karo sida kiimikada farxad sii daayay by jirka u keeni joojiyaha iyo kor u dareen wanaagsan. Fiiri boggayaga tusmo saamaynta nooc Kratom halkan.
Falanqaynta ka warbixin Qaramada Midoobay ka hesho in khatarta mukhadaradka Kratom waa aad u hooseeya. Dhab ahaantii, waxa ay noqon doontaa wax dheeraad ah oo ku habboon in ay ugu yeeraan halis ah in la dhiso caado sida ka soo horjeeda qabatinka jirka. Dhacdooyinka xidhnaanta iyo dhisidda caado la Kratom kaliya waxay dhacdaa marka qof Isticmaalka xad-dhaaf ah muddo bilo ama sannado waqti. Haddii aadan dhici in ay isticmaalaan aad u badan oo ka mid ah si isku xigxigta, raa dulqaad ah u saameynada dhir this. Tani waxay keeni kartaa dadka qaaarkood oo leh shaqsiyad la qabatimo si ay u dareemaan baahida ah in la qaato iyo aad u badan. Xaaladahan, waxaa suurto gal ah in Joojintu Kratom waxay keeni kartaa in calaamadaha bixitaanka qaar ka mid ah marka aad joojisid sida caro, tamarta yar yahay, iyo walaaca. Laakiin mar kale, khatarta taasi waa wax iska yar yahay iyo si tartiib tartiib ah loo horumariyo lahaa oo keliya muddo dheer. Cabsi laga halista Kratom waxaa inta badan ilaa LAA ee ay xarumaha kabid in ka qaadaan kun oo dollar si ay "daawo" bukaanada ku reeba ay u malaynayeen.
Kratom ma keento nooca tiirsanaanta jirka in daawooyin kale sida morphine, heroin ama oxycodone waxay keeni kartaa. Dhab ahaantii, warshad this dabiiciga ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu daweeyo ee astaamaha u-barashada ka dawooyinkan si ay u fududaato inuu ka tago balwadda ah. Caleemo Kratom ayaa xitaa lagu talinayaa by Dr. Oz in la yareeyo calaamadaha inta lagu guda jiro hannaanka sun- ka daawooyin ah muqaadaraad ilaa wax idinka Adkaan oo muddo ka bixitaankii.
Xataa haddii aadan helin caadaysatay Kratom, wararka qaar jeclaan lahaa inaad rumaysan tahay in geedka uu leeyahay sida loo dhaamo sare ee waxyeellooyinka negative in aad hubto in aakhirka si xun u dulmiyin. Mid ka mid ah article sheegay in Kratom ahaa daroogada ugu dambeeyay samaynta ay joogaan dareemay in xarumaha gurmadka degdegga ee guud ahaan USA. Waxaa si fudud waa la waayay wax caddeeyn in ay taageerto kor u sheegay this. Isticmaalka qaadashada caadiga ah, Waxyeelo Kratom waa dhif iyo naadir ah oo aadan caadi ahaan ka kooban yihiin wax ka Shar badan lallabo, dawakhaad, rabitaanka cuntada oo luma, calooshu ku, matag, ama hurdo. Si ka duwan killers xanuun dawooyinka kale, Mitragyna Speciosa ma aha sun ah in jirka iyo waxa aanu keeni giriir ama curyaanimo maskaxeed sida morphine. Sidoo kale ma jirto wax khatar ah hypoventilation - walaaca ugu daran marka la qaadanayo morphine xanuunka. Ha u ogolaan eedeymo khatarta Kratom aad joojiso isticmaalka geedo yaryar oo tani masuuliyad leh. Haddii aad doonaysaan inaad isticmaasho hab ku haboon yihiin oo ay gacanta ku qaadashada aad, Kratom waa ammaan oo si weyn ay ka faa'iideysan doonaan shakhsiga fayo-qabka.
Waxaa lahaa la mid dhimashada loo aaneeyey inay u Kratom. Waxa ay ahayd in Colorado, Wiil teenage, dalalka uu shahaadada dhimashada si.
Wiil ee Colorado lahaa walxaha more waxyeello in uu nidaamka si Kratom oo keliya dhib ma noqon karo.
Waxaan qaatay kratom labo jeer nolosheyda iyo labada jeer baan ku fikiray si aan u sii socotay inay u dhintaan. Waan ku soo tuuray oo uu lahaa shuban xun saacado labada jeer. Waxa uu ahaa gabi ahaanba aad u xun. Si kastaba ha ahaatee, Ninkaygii oo ay qaadato in xanuun iyo inuu gabi ahaanba ku faraxsan yahay la. Waxaan ha reccomend, laakiin waxa uu dhaartaa by.
Waxaan dhawaan soo iibsatay kratom in ay qaataan, halka weening off of Percocet iyo in ay sii wadaan iyadoo la isticmaalayo waayo, xanuun joogto ah. Bacda ayaa sheegay in 20miligrams of kratom iyo waxaa jira 40 kaabsoosha. Ma hubo of qadarka per kaabsal? kor u qaadeen si ay u 4-5 kaabsoosha maalin oo waxaan ahay hoos si 35miligrams of Percocet ka 85miligrams maalin kasta!! Taasi waa mid laga cabsado!! Ku raaxayso qaxwaha iyo khamriga, sidoo kale qaadan Valium sida loogu baahan yahay walaaca, oo waxaan qaadi pill miisaan lumis in badan oo ka mid ah caffeine ah, waa iska caadi in ay sameeyaan, halka in ku kratom, haddii aan ku kala bixiyey 2-3 saacadood? Sidoo kale, qaadan Percocet ah ee u dhexeeya oo ku saabsan 2-3 saacadood ka dib kratom oo ay sii ween, waa in okay? Mahad hanuunin,!
noqon Just dadka taxaddar! Waxaan la qaadanaya 15 maeng da kaabsoosha habeen sanadkii la gabi ahaanba wax dhibaato ah ma ilaa shalay waxaan lahaa qalal Malaakii grand hurdada aan. kids My ay iga heleen oo buluug iyo nonresponsive. Ma qaar ka mid ah cilmi-online iyo ogaaday waxa la isticmaalo kratom dhici kara. Cabsi qoyskeyga waa in la dilaa! ma samayn doonaa in iyaga mar kale. ammaan.